आज किन हुदैछ उपत्यकाको सुरक्षा ब्यबस्थापन कडा? पाँच सय प्रहरी परिचालन ! - jagritikhabar.com
आज किन हुदैछ उपत्यकाको सुरक्षा ब्यबस्थापन कडा? पाँच सय प्रहरी परिचालन !
११ पुस, काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको आजदेखि सुरु हुन लागेको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन एवं आठौं महाधिवेशनलाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था क’डा पा’रे’को छ । उपत्यकाको सुरक्षा हेर्ने महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो) रानीपोखरीले शुक्रबारबाटै माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सुरक्षा बढाएको छ ।
कार्यक्रम स्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठान क्षेत्रमा पनि उल्लेख्यमात्रामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । मेट्रोका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) उत्तमराज सुवेदीले माओवादीको सम्मेलनका लागि पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी जनशक्ति परिचालन गरिएको जानकारी दिए । ‘दिनअनुसार परिचालन हुन्छ । प्रत्यक्षरुपमा ख’टिने जनशक्ति पाँच सय प्लस हुन्छ,’ उनले भने, ‘ पेरिसडाँडामा छुट्टै टोली ख’टिएको छ । आवश्यकताअनुसार थपिँदै जान्छ ।’
‘उद्घाटन सत्रमा आउने भीआईपीहरुदेखि लिएर कार्यक्रमस्थलको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । बन्दसत्रका लागि पनि मिलाइएको छ,’ डीआईजी सुवेदीले थपे, ‘यसबाहेक थप हुनसक्ने अ’प्रिय गतिविधिलाई मध्यनजर गर्दै जनशक्ति परिचालन गरिएको छ ।’ उनकाअनुसार सम्मेलनको सुरक्षाका लागि सीसीटिभी निगरानीदेखि कु’कु’र प’रि’चा’लनसम्म गरिएको छ ।
माओवादी महाधिवेशनलाई लक्षित गरी महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट ट्राफिक व्यवस्थापन पनि मिलाएको छ । ‘मान्छे र गाडीको मुभमेन्ट हुने प्रज्ञा भवन, कमलादी वरिपरीको क्षेत्रमा थप ट्राफिक र ट्राफिकलाई सपार्ट गर्न सिभिल पुलिस पनि ख’टाएर व्यवस्थापन गरिएको छ,’ सुवेदीले भने ।
पार्किङस्थल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कम्पाउण्ड, पश्चिम एरियातिर पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । ‘धेरै भी’डभा’ड न’ग’र्ने र नेता कार्यकर्ता तथा केही पाहुनामात्र आउनेमात्र आउने भन्ने भएको हुनाले त्यति समस्या नहोला । यद्यपि मुभमेन्ट बढ्दै गए खुला मञ्चमा राख्छौं,’ उनले भने । माओवादीले अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी चयन नगर्ने । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष बाहेकका पदाधिकारी आइतबारबाट काठमाडौंमा सुरु गर्न लागेको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चयन नगर्ने सम्भावना बढेको छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेको माओवादी केन्द्रले उद्घाटन हुनुभन्दा केही घण्टामात्र अघि सम्मेलनलाई महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिमात्र चयन गर्ने र अन्य पदाधिकारी पछि चयन गर्ने सम्भावना रहेको माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काललाई पदाधिकारीलाई पूर्णना दिन अनिच्छा व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ ।
महाधिवेशन नेतृत्व चयन भन्दा पनि विचारको बहसमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने प्रचण्डको भनाइ छ । उनले महाधिवेशनमा पेस गर्ने प्रस्तावसमेत स्थायी कमिटीमा पेस गरेका थिए र त्यहाँ प्राप्त सुझावका आधारमा त्यसलाई पूर्णता दिएका छन् । ‘हामी अरु बुर्जुवा पार्टी जस्तो पद र नेतृत्वका लागि भन्दा पनि विचारको बहसमा केन्द्रीत हुँदैछौं,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘महाधिवेशनमा हामी समाजवाद यात्रा, विश्वराजनीति, वित्तीय पुँजीवाद, जलवायु परिर्वतन लगायका सवै विषयमा घनिभूत छलफल गर्ने छौं ।’
‘हामी नेतृत्वका लागि कु’दा’कु’द ग’र्ने र त्यसका लागि गु’टब’न्दी ग’र्नेमा छैनौं’ उनले भने । बहस र छलफलका लागि विभिन्न २५ वटा समूह बनाइएको माओवादीले जनाएको छ । केहीलाई हलमा र केहीलाई टेन्टमा बहसको व्यवस्था गरिएको छ भने ८/९ वटा छलफल पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा गर्ने तयारी माओवादी केन्द्रको छ ।
पदका लागि कु’दा’कु’द न’हु’ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि पदाधिकारीमा नेताहरु आकांक्षी बढी हुँदा त्यसको व्यवस्थापनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई चु’नौ’ती थपिएको छ । त्यससँगै उनले तत्कालका लागि अध्यक्ष र केन्द्रीय समिति मात्र चयन गर्ने र अन्य पदाधिकारी पछि घोषणा गर्ने तयारी गरेका हुन् । यसअघि २०६९ माघमा मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा आयोजना गरिएको सातौं महाधिवेशनको मोडेलमा नेतृत्व चयन गर्ने तयारी प्रचण्डले गरेका छन् । प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेतृत्व माओवादीमा तयार नभएकाले उनले चाहे अनुरुप हुनेमा शं’का छैन ।
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नियमित प्रक्रियाबाट कूल एक हजार ४८३ जना प्रतिनिधि चयन भएका छन्। त्यसको कूल १० प्रतिशत मनोनयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार आयोजक समितिबाट १७९ सहभागी हुनेछन् । यस्तै सल्लाहकारबाट १४९, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चबाट १२५, केन्द्रीय विभागबाट १०२, केन्द्रीय प्रतिनिधि २७ र प्रदेश प्रतिनिधिबाट ८०३ जना राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।
यस्तै प्रदेश–१ बाट ९६, प्रदेश–२ बाट १०६, वाग्मती प्रदेशबाट १२८, गण्डकी प्रदेशबाट ७४, लुम्बिनी प्रदेशबाट १०५, कर्णाली प्रदेशबाट ८७, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ८४, प्रवास प्रदेशबाट ३४, विशेष प्रदेशबाट ४२ र सम्मर्क समन्वय प्रदेशबाट ८३ जना सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले कूल १४८ प्रतिनिधि मनोनयन गरेपछि कूल प्रतिनिधि संख्या एक हजार ६३१ जना पुग्नेछ ।
यो पनि, अभिभावकविहीन भइ सडकमा भौतारिरहने बालबालिकाले विद्यालय जान पाएपछि भने उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने गरेका छन् । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–६ डुम्रिगाउँस्थित दिदीघर संस्थामा रहेका बालबालिकाले आफू पढ्ने विद्यालयमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने गरेका हुन् । सोही वडामा रहेको ग्रेट अरनिको माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत ती बालक सबै कक्षामा प्रथम, द्वितीय वा तृतीय हुने गरेका छन् । प्रथम त्रैमासिक परीक्षामा नर्सरीबाट सन्तोष थापाले प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् ।
नर्सरीमा चार विद्यार्थीले पठनपाठन गरिरहेका छन् । त्यस्तै एलकेजीमा निखिल खत्रीले प्रथम स्थान हासिल सफल गर्न सफल भएका छन् । एलकेजीमा दुई विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यस्तै युकेजीमा दिलीप मगरले प्रथम स्थान हासिल गरेका छन् । अहिले युकेजीमा चार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यस्तै कक्षा १ मा रेखा विकले प्रथम स्थान हात गरेकी छिन् । युकेजीबाट कक्षा जम्प गरेर १ मा आएकी सुनिता विकको पनि पढाइ राम्रो छ । कक्षा १ मा दुई विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
त्यस्तै कक्षा २ मा अध्ययनरत राजेश चौधरी तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल भएका छन् । त्यस्तै कक्षा ३ मा सुस्मिता चौधरी कक्षा प्रथम भएकी छिन् । कक्षा ३ मा संस्थाका सात विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस्तै कक्षा ५ बाट मञ्जु चौधरी प्रथम हुन सफल भएकी छिन् । सोही कक्षामा अहिले दुई विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
अहिले संस्थामा २२ विद्यार्थीलाई राखिएको अध्यक्ष स्यानी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । “हामीले २२ विद्यार्थीलाई राखेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “ती सबै घरबारविहीन अवस्थामा रहेकाहरू हुन् ।” कोही आमाबुवा नभएका छन् भने कोही आमाबुवाले स्याहारसुसारमा कुनै ध्यान नदिएकाहरु रहेका उहाँको भनाइ छ । कोही भने आमा बितेर बुवाले अर्कै विवाह गरेर बसेका पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो । “यी सबै विद्यार्थी स्कूल जानबाट बञ्चित थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यस्ता विद्यार्थी पठनपाठनबाट बञ्चित नहोऊन् भनी राख्ने गरेका छौँ ।”
ती सबै बालबालिकालाई अहिले स्यानीले नै हेरचाह गर्दै आएकी छिन् भने घरमा पनि पठनपाठन गर्ने गरेकी छिन् । “विद्यालयमा एउटा आधार बनेको हुन्छ, त्यो कुरा घरमा आएर पनि पढाउने सहज वातावरण भयो भने विद्यार्थीको पठनपाठन धेरै राम्रो हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले अहिले पठनपाठनका लागि एक शिक्षिका पनि राखेका छौँ, अहिले म आफैँ पनि पढाउँछु, त्यसले गर्दा पनि नतिजा सुधार भएको हो ।” अहिले उपमहागरपालिका र किवानिश क्लबले वार्षिक रु दुई÷दुई लाख सहयोग गर्दै आएका छन् । त्यसबाहेक अन्य कुनै निकायबाट सहयोग नआएको उहाँको भनाइ छ ।
आफ्नै सन्तान जसरी ती बालबालिकालाई माया दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । “उनीहरुलाई आफ्नै सन्तान जसरी माया दिएर राखेकी छु”, उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकालाई भविष्यमा ठूलो मान्छे बनाउने मेरो लक्ष्य छ ।” ती बालबालिकालाई साँझ–बिहान संस्थामै पढाउने वातावरण पनि बनाएको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । विद्यालयमात्रै पढेर नहुने भन्दै उहाँले साँझ बिहान पढाउनका लागि संस्थामा शिक्षिका पनि राखेको बताउनुभयो । विसं २०६१ देखि संस्थाले पिछडिएका, गरिब तथा सहाराविहीन विद्यार्थीको भविष्य उज्ज्वल बनाउँदै आएको छ भने २०७५ देखि उहाँले आफैँ बालबालिका राखेर पठनपाठन गराउन थाल्नुभएको हो ।
दिदीघर संस्थाको तुलसीपुर–१३ बखरियामा शाखा सञ्चालनमा ल्यााइएको छ । सोही शाखामा अहिले छात्रहरूलाई राखिएको उहाँले बताउनुभयो । डुम्रीगाउँमा छात्रा र बखरियामा छात्रलाई राखिएको उहाँको भनाइ छ ।